काठमाडौं, ६ वैशाख – नेपाल प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको अदालती मुद्दा विवादमा लहरो तान्दा पहरो घर्कने र धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याउने तथ्यहरू भेटिएका छन् । लोकान्तरलाई प्राप्त विवरण र तथ्यहरूले प्रहरी प्रमुख पदको प्रत्यासीका डीआईजीको कासमू फाइल अदालत पठाउँदा लोकसेवा आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई ढाँटेको खुलासा भएको छ ।
यससँगै आईजीपी नियुक्ति विवादमा संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग पनि नराम्ररी चिप्लेको भेटिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रमुखका प्रत्यासी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द डीआईजी पदमा रहँदाको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू) को अभिलेख पेश गर्न लोकसेवालाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले गएको चैत ३ गते त्यस्तो आदेश दिएका थिए । त्यसको जवाफ पठाउँदा लोकसेवा चिप्लिएको भेटिएको हो ।
सर्वोच्चले सिलवाल र चन्दको डीआईजी पदमा रहँदाको अभिलेख पेश गर्न भनेपनि लोकसेवाले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को कासमू मात्र पठाएर र अर्को आर्थिक वर्षको कासमू अभिलेख आफूकहाँ नभएको गलत जानकारी गराएर सर्वोच्चलाई ढाँटेको खुलासा भएको हो ।
नयाँ कानून बनेसँगै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि नेपाल प्रहरीको कासमू लोकसेवामा पठाउन शुरु गरेको थियो ।
त्यसयता हरेक आर्थिक वर्षको असोज २२ गतेभित्रै प्रहरीको कासमू लोकसेवामा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रहरी नियमावली २०७१ मा यस्तो व्यवस्था छ ।
नयाँ कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ र आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को एआईजी, डीआईजी, एसएसपी र एसपीको कासमू अभिलेख लोकसेवामा बुझाएको छ ।
तर सर्वोच्चको आदेशपछि लोकसेवाले डीआईजीद्वय सिलवाल र चन्दको आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को अभिलेख मात्र आफूसँग भएको भन्दै त्यही विवरण सर्वोच्चमा पठायो । लोकसेवाले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ बाहेक अन्य वर्षका निजहरूका (सिलवाल र चन्दका) कासमू आयोगमा नभएको जानकारी सर्वोच्चलाई गरायो ।
तर लोकान्तर खोजले सबै एआईजी, डीआईजी, एसएसपी एवं एसपीहरूको आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को कासमू अभिलेख पनि लोकसेवामा सुरक्षित रहेको पत्ता लगाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को डीआईजीहरूको (अरूसँगै) कासमू अभिलेख नेपाल प्रहरीले गएको असोज २१ गते लोकसेवामा बुझाएको भेटिएको छ ।
लोकसेवा आयोगका नीतिनियम शाखाका खरिदार विष्णुप्रसाद दाहालले असोज २१ गते एआईजी र एसएसपीहरूसँगै डीआईजीहरूको कासमू अभिलेख बुझी लिएँ भन्ने भर्पाइ गरेका छन् ।
नेपाल प्रहरीले २०७३ साल असोज २१ गते प्रहरी नियमावली २०७१ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रहरी अतिरिक्त, महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकहरूको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारमहरू लोकसेवामा बुझाएको भेटिएको छ । उक्त पत्रमा आईजीका प्रत्यासी चार डीआईजीहरू सिलवाल, प्रकाश अर्याल (हाल प्रहरी महानिरीक्षक), चन्द र बमबहादुर भण्डारीको नाम समावेश छ ।
आफूसँग भएको विवरण छैन भनेर किन र कसरी ढाँट्यो लोकसेवाले सर्वोच्चलाई ?
लोकान्तर डटकमले लोकसेवा आयोगका सहसचिव –कानून सेवा) पाराश्वर ढुंगानालाई सम्पर्क गरी यस विषयमा जिज्ञासा राखेको छ । ‘हामीले त सर्वोच्चले मागे अनुसारकै कासमू अभिलेख सर्वोच्चमा पेश गरेका हौं,’ ढुंगानाले भने ।
त्यसो भए ७१/७२ को बाहेक अन्य आर्थिक वर्षको कासमू अभिलेख छैन भनेर किन ढाँटेको ? यो प्रश्नको जवाफमा ढुंगानाले भने, ‘काम गर्दा कहिलेकाहिँ चिप्लिएको हुनसक्छ । यदि तपाईंले भेटेको सही हो भने हामी चिप्लिएकै हो । कसरी यस्तो भयो थप बुझेर तपाईंलाई खबर गरौंला ।’
सरकारले वरियतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेपछि आईजीका अर्का प्रत्यासी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय खतिवडा र केसीको संयुक्त इजलासले दुई डीआईजी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दको डीआईजी हुँदाको कासमू अभिलेख पेश गर्न लोकसेवालाई आदेश दियो ।
गएको चैत ३ गते न्यायाधीशद्वयले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दाका पक्ष विपक्ष नेपाल प्रहरीका डीआईजीद्वय सिलवाल र चन्दको डीआईजी पदमा रहँदाको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू) अभिलेख पेश गर्नू ।’
त्यही आदेशको जवाफ सर्वोच्चलाई फर्काउँदा लोकसेवा चिप्लिएको देखिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले सिलवाल र चन्दको मात्रै कासमू अभिलेख मगाएको थियो । लोकसेवाले त्यही बमोजिम ०७१/०७२ को सिलवाल र चन्दको कासमू अभिलेख सर्वोच्चलाई पठायो । २०७२/०७३ को कासमू अभिलेख छैन भनेर लोकसेवा एकातिर चिप्लियो भने अर्कातिर सरकारले चाहिँ त्यही आदेशमा सर्वोच्चलाई चलाखीपूर्वक हिसाबले जिल्लाइदिएको पत्ता लागेको छ ।
सर्वोच्चको उक्त आदेश सरकारका विभिन्न निकायमा नाममा पनि थियो । स्रोतहरूका अनुसार महान्यायाधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठको चलाखी र रणनीतिबमोजिम सरकारले चारैजना डीआईजीको कासमू अभिलेख सर्वोच्चमा पठायो । ‘सरकारले चारैजना डीआईजीको कासमू पठाएपनि सर्वोच्चले सिलवाल र चन्दको बारेमा मात्रै बोल्न सक्थ्यो तर चारैजना डीआईजीको कासमूका बारेमा बोल्दा परिस्थिति प्रकाश अर्यालको पोल्टामा पुगेको हो,’ अदालतकै एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।
चन्द र सिलवालको कासमू भिडाउँदा सिलवालको धेरैमाथि छ । तर चारैजनाको भिडाउँदा सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम सिलवालभन्दा प्रकाश अर्यालको कासमू अभिलेख बढी छ । यसबारेको विवरण लोकान्तरले एक गहन खोजमार्फत पहिलोपटक बाहिर ल्याएको थियो ।
चारजना डीआईजीको कासमू विवरण भिडाउँदा अर्यालको बढी भेटिएपछि सरकारले उनलाई नै प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिसकेको छ ।
सर्वोच्चका अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित पाँचजना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले चारजना डीआईजीमध्ये सिलवालको कासमू अंक बढी भएको उल्लेख गरेको थियो ।
हामी होइन, सर्वोच्चका न्यायाधीशले गडबडी गरे: लोकसेवा आयोग अध्यक्ष मैनाली
यसैबीच, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले चारजना डीआईजीको कासमू अंक गणना गर्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशले गडबडी गरेको प्रसंग आयोग अधिकारीसमक्ष सुनाएका छन् । ‘यसमा हामी होइन, सर्वोच्चका न्यायाधीशले गडबडी गरेका छन् । प्रकाश अर्यालको कासमू बढी छ तर न्यायाधीशहरूले नवराजको कासमू अंक बढी भएको आदेश सुनाएर गडबडी गरेकै हुन्,’ उनले अघिल्लो हप्ता लोकसेवाका सदस्य र केही अधिकारीसमक्ष यसो भनेको स्रोतको दाबी छ । मैनाली हाल देशबाहिर छन् ।
इमाडोलपछि टेकुमा ग्यास उत्खनन गरिँदै